श्रीमानकी प्रेमिका - ।। Naya Kuro ।।
३१ भाद्र २०७६, मंगलवार १४:२१ September 17, 2019 Naya KuroLeaveaComment on श्रीमानकी प्रेमिका
घर परिवारले रोजेको ऊ मेरो लोग्ने, अनि म उसकी श्रीमती बनेको एक वर्ष मात्र पुगेको थियो। ऊ पातलो अग्लो ,गोरो, ठूला ठूला कान परेको राम्रो ,पढे लेखेको धेरै पढेको थियो भने म मोटी ,काली ,गुन्द्रुके कपाल भएकी जम्मा ११ पढ्दा पढ्दै पेट भित्र बच्चाले आफ्नो जिन्दगी सुरूआत गर्दै गर्दा मेरो पढाइ भने विश्राम लिइसकेको थियो।
‘उनले त्यति मीठो कसलाई बोल्न सक्छन् र ? बैनी त होइन। बैनीलाई तँ भनेर सम्बोधन हुन्छ। साथीहरूलाई ? त्यो पनि हुन सक्दैन। लामो लर्को तानेर बिस्तारै बोल्न त माया नलागेको मानिसलाई त यो पक्कै होइन। थोरै माया मात्रै लागेकोलाई पनि हुँदैन।
ऊ त विशेष हुनु पर्छ। म भन्दा नि विशेष ।अहँ यो त हुनै सक्दैन। म त उहाँको श्रीमती। जिन्दगीभर साथ दिने बाचा कसमसहित आफ्नो घर छोडेर उसैको भरमा रहर सबै मारेर आएकी । उसका गन्तब्य नै मेरा हुन् भनेर दुख सुखमा साथ दिनलाई आएकी । म भन्दा त विशेष हुनै सक्दैन । तर मलाई त आजसम्म मीठो बोलेकै छैनन्। ह्या शंकाले लंका डढाउँछ भन्छन् यस्तो शंका गर्नु ठीक होइन।’
मेरो दिनभरिको कामले बेलुका शरीर लत्रक्क हुन्थ्यो। बिस्तार बिस्तार खाना खान रुच्न छाडेको थियो। शरीर पनि कमजोर भएको थियो। काम गर्न फिटिक्कै मन लाग्न छाडेको थियो। भान्छा त छिर्न नै मन नलाग्ने भैसकेको थियो ।
मेरो गाउँकी साथी पनि त्यही काठमाडौंमै डेरा लिएर बसेकी थिइ। उसको भने गर्भवती भएको छ महिना पुगिसकेको थियो। ऊसँग भलाकुसारी गरें। तर उसको श्रीमानले गर्ने सहयोग सुनेर मन भने अमिलो भएको थियो। त्यही पनि मैले आफ्नो पीडा उसलाई सुनाउन चाहिनँ।
साँझ घर फर्कें। श्रीमान् एउटा मोबाइल हातमा राखेर च्याट गर्दै अर्को हातले ढोका खोले। उनलाई म आएकोर गएको नभएको केही मतलब थिएन। तर यसलाई मेरो स्वतन्त्रता भन्न भने फिटिक्कै मन लागेन। छिटो छिटो खाजा बनाएर खाना पकाउन थालें।
उनीसँग गफ गर्दा यस्तो लाग्यो कि उनीसँग म लामो समयदेखि कुरा गरिरहेको छु। तर च्याटमा भने पुरानो एउटा पनि मेसेज थिएन। उनीहरू बीच भएको झगडा मैले बुझ्न सकेँ। उनीहरू बीच सबै भएको रहेछ जुन श्रीमान्र श्रीमती बीच हुन्छ।
केटीले भने बिहे गर्ने जिद्दी गरेकी रहिछे। त्यो रात ऊसँग कुरा भयो। जो मेरो हुने वाला सौता थिइ। भिडिओ च्याट गरम न आज भन्न थालेपछि भने मेसेन्जर काटिदिएँ।
श्रीमान् त पूरै मायाको खाडलभित्र डुबेको हेर्दा म आँसुको खाडलभित्र डुबेकी थिएँ। एकाएक म रित्तो महशुस गर्न थालें। लोग्ने मानिसको निर्दयी मन बनाउने ईश्वर देखेर पनि रिस उठ्न थाल्यो।
पेटको बच्चा सम्झिएँ फेरि रोएँ। महिना दिन नै भैसकेको थियो राम्ररी खाना खाएको थिइन। कमजोर महशुस भैरहेको थियो। फेरि श्रीमानसँग मनमनै रिसाएँ।
बिहान पख जाडो बढे जस्तो भयो । शरीर थरथर काम्न थाल्यो । श्रीमान पनि उठे । उठ्ने बित्तिकै ट्वाइलेट गए । केही छिनपछि चिया भनेर अर्डर गरे । म कुर्थाको सलले रातभरि रोएर सुन्निएका आँखा र मुख छोपेर चिया बनाउन उठें ।
पूरै घुमैराखेको थियो । बल्ल बल्ल चिया बनाएर श्रीमानलाई दिएँ । उनले एकचोटि मेरो मुख पनि हेरेनन् । मोबाइलमा नै ध्यान थियो । केही छिनपछि मैले हिम्मत गरेर भनें “ मलाई सन्चो छैन ।”
नभन्दै केही समयमा एउटी २२ वर्ष जातिकी गोरी पुष्ट शरीर भएकी केटी घर आई । त्यो त्यही केटी थिई । जुन मैले फेसबुकमा देखेकी थिएँ । महिलालाई एउटा रुख देखाएर यो नै तेरो सौता हो भन्यो भने त्यो रुख नै उखालेर फ्याक्ने जात हो ।
तर यहाँ त श्रीमानको प्रेमिका त्यहाँ माथि आफू बिरामी भएको बेलामा देख्दा मन निचोरेको कागती भन्दा बढ्ता भयो । अब त घरमै ल्याउन थालेछन् भनेर झन् पीडा थप्यो । त्यो केटी घरभित्र छिरेबाट मलाई झन् ज्वरोले च्यापे जस्तो भयो । जिन्दगी नै भारी लाग्यो ।
“हेर रुपा म तिमीलाई चिन्छु । मेरो श्रीमानसँग तिम्रो सम्बन्ध रहेछ । सायद यो कुरा म बच्चा जन्माइसकेपछि थाहा पाएको भए या त म बच्चा नै नपाउने भएको भए त्यति पीडा हुन्थेन होला जति पीडा आज भएको छ । तिमी पनि महिला हौ ।
एक दिन तिमी पनि आमा बन्नेछौ । गर्भमा बच्चा रहँदा श्रीमानको माया कति आवश्यक हुन्छ त्यो पनि तिमीले बुझौली । आज मेरो यो अवस्थामा तिमीलाई मन पराउने मान्छे भोलि तिमी म जस्तै हुँदा अरुलाई मन नपराउला भन्न सकिन्न । तिमी अहिले सुन्दरी छौ । जवान छौ । तर महिलाको सुन्दरता बच्चा नहुने सम्म हो । राम्ररी बिचार गर ।मेरो भविष्य त बिग्रिसक्यो । सायद जिन्दगीभर हामी त सँगै हुन सक्दैनौ । तिमी चाहिँ आफ्नो ख्याल गर ।तिमी म भन्दा सानी लाग्यो । मेरो बहिनी जस्तै भएकोले सुझाव दिएको हुँ ।”
तर मस्तिष्क बोल्यो “आत्महत्या गर्नु कायरता हो । जिन्दगी दुई दिनको छ । सुख र दुस्ख नै जिन्दगीका पाटा हुन्। सधैं सुख मात्र मिल्यो भने सुख को के मूल्य ? जिन्दगी के रमाइलो ? यस्तो दुस्ख पर्दा त दिमागले काम गरेर समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ।
म यही मान्छे भनेर बस्नु किन ? भगवानले दिएको यो शरीरको के काम । म पनि आफूले सक्ने काम गर्न सक्छु । अरु केही नसकेनी कसैको घरमा खाना पकाएर खुवाउन सक्छु । केही नभए हार गुहार गरेर कार्यालय सहयोगीको जागिर खाम्ला ।
त्यति त गर्न सक्छु । यसले अब मलाई माया गर्दैन । म यही भनेर किन कुर्नु । घरबाट बाहिर निस्किएपछि जिन्दगी हिँड्ने बाटाहरू प्रशस्त हुन्छन् ।बस् केही दिनलाई गाह्रो हुन्छ । संघर्ष नगरी फलको आशा पनि त ठीक हुँदैन ।
जिन्दगीले राम्रो पाठ सिकायो । घाइते बाघिनी झन् बलवान हुन् सक्छे । म गरेर देखाउँछु । भोलि मेरो बच्चाले गर्व गर्न सकोस् ।मानिसलाई कस्ता कस्ता दुस्खमा त बुद्धिले काम गरेका हुन्छन् । मेरो त के बिग्रेको छ र ? मेरा बा आमाले यस्तै कायर छोरी होस् भनेर त पक्कै जन्माएनन् होला ।”
डा. सबिता सुबेदी
हेलिकप्टर धान खेतमा आकस्मिक अवतरण , सबै यात्रु सुरक्षित
२ पुष २०७६, बुधबार १५:५४ December 18, 2019 Naya Kuro
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट :कर्णाली र लुम्बिनी विजयी
७ माघ २०७७, बुधबार ०६:५० January 20, 2021 Naya Kuro